Eey qaaday Rikoorka Sanadkaan (VIDEO) - Mucjisooyinka Aduunka - iftineducation.com
Eey qaaday Rikoorka Sanadkaan (VIDEO) – Mucjisooyinka Aduunka
aadan21 / November 24, 2012
Eey Qaaday Iskoor
iftineducation.com – Todobaadkan ayeey Saxaafada Caalamku hadal hayeen Eeyga dunida ugu yar oo lagudoonsiiyey Shahaado uu ku Muteestay Astaamaha uu leeyahay & Reerkiisa oo Dhaqaalo xoogan ku kasbaday.
Eeygan oo Da’adiisu lagu sheegay 2sano jir ayaa noqonaya mid COON ah, kaasoon laga dareemi kareen koriin hada kadib kusoo siyaada , Hadaba Qoyska leh Eeygaan ayaa shaaciyey ineey ku diideen Lacag dhan 1,000,000 ee Lacagta Mareeykanka.
Shahaadada eeygan lagudoonsiiyey oo ahaa mid uu ku muteestay Yaraantiisa & gaabnidiisa kaasoon laga filaneen in la helo isla sanadkaan mid Asaagiisa ah.
HALKAAN HOOSE KA DAAWO MUUQAALKA OO CAJIIB AH .
Abaayo Sawirkaaga ayaa La igu Dhacay Facebook Hadaan Arki Lahaa Qofkaas Waan Dili Lahaa – Sheeko Qosol Badan .
Nin Xabsi Dheer u galay kadib markii ay Dagaalameen eey uu lahaa iyo Bisad cid dariskeeda laheyd Daawo Video